Adeegga dadka laxaadka la’ - InfoFinland
Nolosha Finland > Caafimaadka > Dadka naafada ah > Adeegga dadka laxaadka la’
Degmooyinku waa in ay adeegyada gaarka ah ee aan laga maarmin u fidiyaan dadka naafada ah. Kuwaasi waa tusaale ahaan baabuur ku qaadista, guri u rarida iyo kalkaaliye khaas ah. Ujeedooyinka adeegyadaasi waa caawinta dadka laxaadka la’ si ay uga qayb galaan bulshada iyo inay u fududayso nolosha yagoo laxaad la’.
Hadii aad sharci iyo daganaansho aad ku leedahay wadanka Finland, waxaad xaq u yeelanaysaa adeegyadaasi ay bixiso dagmadu. Ka akhri macluumaadka dheeraad ah ee ku sahabsan adeegyada aad xaqa u leedahay ee ay bixiso dagmada aad dagan tahay, boga bangiga macluumaadka Guri degmo ee gudaha Finland.
Buuga gacanta ee adeegyada naafadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Adeegayada naafada iyo hawlaha caawintaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Inta badan adeegyada naafada waxaa lagu helaa caddeyn dhakhtareed. Tusaale ahaan, u tag baaritaan dhakhtareed rugtaada caafimaadka. Markaad haysato shahaado ama cadayn dhakhtareed, la xidhiidh xafiiska sooshiyaalka ee dagmadaada. Dagmooyinka waxaa jira shaqaale sooshiyaal oo u qaabilsan dadka laxaadka la’. Shawaalahaasi wuxuu kaa caawin karaa hagida iyo dalbashada adeegyadaasi. Xafiiska sooshiyaalku (Sosiaalitoimisto) wuxuu kuu samaynayaa qorshaha adeegaasi (palvelusuunnitelma). Ujeedada qorshaha adeegu wuxuu cadaynayaa, nooca adeeg ee laxaad la’aantaada khuseeya ee aad heli karto. Helitaanka adeega go’aan baa laga soo saarayaa, kaasi oo aad dib u dalban karto hadii aanad ku qancin go’aanka helitaanka adeegyadaasi.
Qalabka taageerada dadka laxaadka la’
Xaruntaada caafimaadka iyo dhakhtarka sentralka ah ayaa bixinaya kharashka qalabka lagu bixiyo daaweeyn kobcin ah (lääkinnällinen kuntoutus). Taasi micnaheedu waxa weeyaan inaanad ku khasbanayn inaad bixiso qalabka caawimaadda ah ee ad ugu baahantahay nololmaalmeedkaaga.Qalabkaasi lacag la’aanta ahi tusaale ahaan waa baaskiilada dadka naafada ah, sameecadaha maqalka, bakoorada iyo ey tabobaran.
Hadii ay tahay in gurigaaga wax ka badel lagu sameeyo ama lagu rikibayo qalab kaa caawiya dhaq dhaqaaqaga guriga dhexdiisa, waxaad ka heli kartaa kabitaan dhaqaale dagmadaada.Gurigaaga waxaad u badeli kartaa qaab ku dhex wadan karto baaskiilka naafada.Gurigaaga qalabka aad ku rikibi karto tusaale ahaan waxaa ka mida noocyada qalabka wax qaada, qalabka dhagoolayaasha uga diga dabka iyo jalaska albaaba oo lagu kabay laydh big-bigleeya marka lasoo garaaco. Shaqaalaha sooshiyaalka ah ee u xil saaran dadka naafada ah ee degmaada ayaa qiimayn kula samaynaya, shaqaalahaasi baana qabanaya waxa laga badalayo gurigaaga.
Kelada ayaa bixin karta qalabkaasi taageerada kuu ah, ee aad ugu baahan tahay waxbarashada ama shaqada. Waad heli kartaa qalab taageero, hadii aanad shaqo ama wax dhigan karayn qalabkaasi la’aantii. Waydii keelada macluumaad dheeraada oo arinkaasi ku sahabsan iyo sida loo heli karaba qalabyadaasi.
Ku socodka qalabka caawintaFinnish | Iswidish
Hadii aanad isticmaali karayn gaadiidka caadiga ah laxaad la’aantaa owgeed, waxaad xaq u yeelanaysaa in lagu wado ama lagu qaado (kuljetuspalvelu). Hadii u baahan tahay qofbaa ku raaci kara (saattaja), kaasi oo kaa caawinaya safarka. Waad heli kartaa adeega qaadista ama meel gaynta iyo caawiyaha markaad tagayso shaqadaada, waxbarashadaada ama wakhtiga firaaqada waxyaabaha la qabto. Waxaad ka dalban kartaa meel gaynta iyo caawiyahaba shaqaalaha sooshiyaalka degmadaada.Waxaad bixinaysaa lacag u dhiganta inta gaadiidka dadwaynaha aad ku bixisid. Waxaad heli kartaa sidoo kale qiimo dhis tigidhada gaadiidka dad waynaha ah. Waydii macluumaad dheeri ah xafiiska sooshiyaalka ee degmadaada.
Adeegyada gaadiidka iyo qofka safarada ka caawiya naafadaFinnish | Iswidish
Adeega kalkaaliyaha ama caawiyaha
Hadii aad u baahan tahay caawimo badan laxaad la’aantaada darteed, waxaad heli kartaa kalkaaliye kuu khaas ah (henkilökohtainen avustaja). Kalkaaliyuhu wuxuu kaa caawin karaa adiga tusaale ahaan cunto karinta, tukaan kasoo adeegashada, shaqo gaynta, waxbarashada ama waxyaabaha aad xiisayso wakhtiga firaaqadaada ah. Degmadaada ayaa bixineysa mushaarka caawiyaha. Ka dalbo kalkaaliye xafiiska sooshiyaalka degmadaada.
Cawinaad shakhsiyadeedFinnish | Iswidish
Turjumaadda qofka naafada ah waa arrin ka duwan turjumaadda luqada lagu hadlo. Waxaad xaq u leedahay inaad isticmaasho adeega turjumaanta (tulkkauspalvelu) dadka laxaadka la’, hadii leedahay
laxaad la’aanta maqalkakuulovamma tai
laxaad la’aanta dhagaha iyo indhaha
laxaad la’aanta hadalka
iyo hadii aad u baahan tahay turjumaan kuugu turjuma laxaad la’aantaada darteed
iskuul tagid dugsiga hoose dhexe ka dib
arimo noloshaada la xidhiidha dhamaysashadooda
ka qayb galka bulshada
waxyaabaha aad qabato wakhtiga firaaqada ama tamashlayn
Waxaad ka dalban kartaa adeega turjumaanka kelada.
Hadii aanad fahmayn far-dhagoolayaasha luuqadaha finishka, iswidhishfinish waxaad sidoo kale u baahan tahay turjumaan kale. Turjumaanada dadka laxaadka la’ u turjuma ee finishka ahi kuma hadlaan ( suul-dhabaaleeyaan) luuqado kale tooda mooyee. Keladu ma qabanqaabiso turjubaan kale.
Xusuusnow in aad xaqiijiso marwalba baahida turjumaadda marka aad ka daneysaneyso shaqaalaha dowladda. Qabanqaabinta turjubaanka waxaa mas’uul ka ah shaqaalaha dowladda ee aad ka daneysaneyso. Haddii laguugu yeero daryeel caafimaad, xusuusnow in aad horay u sii sheegto in aad turjubaan u baahantahay. Haddii aad nafsad ahaantaada u tagto heeganka ama dhakhtar, waxaad turjubaan ka dalban kartaa Kelada.
Haddii aad qabto naafo adag ama jiro isla markaasna aad ka yar tahay 65 sano, Keladu waxay kuu qabanqaabin kartaa daaweyn baxnaano ah oo adag waxeyna kaa bixin kartaa kharashka ku baxaya baxnaanada. Baxnaanin waxaad heli kartaa, haddii aad naafo ama jiro darteed qabto dhibaatooyin badan oo aadan kaga soo bixin karin nolol-maalmeedka guriga, shaqada ama dugsiga. Daaweynta baxnaaninta ah waxa laguugu qabanqaabin karaa xarunta baxnaaninta ama teraabiyada furan, oo mudada ay socoto aad guriga deganaan karto. Ujeedada baxnaanadu waa in aad sidan si ka fiican uga soo baxdo nolo-maalmeedka.
Haddii anad heli karin daaweynta dib u soo celinta ee adag ee ay Keladu bixiso waxa waajib uu ka saaranyahay qabanqaabada dib u soo celinta degmadaada. Macluumaad dheeri ah ka akhri bogga bangiga macluumaadka qaybtiisa Baxnaanin.
Cunugga qaba dhaawac daran wuxuu xaq u yeelan karaa in uu helo baxnaanada daawaynta ah ee xirfadda sare u baahan.
Waxbarashada iskuulka ee ilmaha laxaadka la’
Ilmaha laxaadka la’ waxaa uu xaq u leeyahay in uu tago iskuul xaafaddiisa. Ilmaha laxaadka la’ waxa uu heli karaa waxbarid xaaladiisa u khaas ah haddii laxaad la’idiisu ay adkaynayso waxbarashadiisa. Sidoo kale ilmuhu waxa uu heli karaa caawiye iskuul (koulunkäyntiavustaja), haddii loo baahanyahay.
Keladu waxay bixin kartaa kharashka qalabka caawinta ah (apuvälineet) ee qaaliga ah ilmaha laxaadka la’na uu ugu baahan yahay waxbarashadiisa. Qalabka caawinta waxa la heli karaa, haddii uunan ilmuhu waxbaran karin la’aantood ama waxbarashadu ay aad ugu adagtahay. Qalabka caawinta waxa la heli karaa ugu horrayn marka uu ilmuhu ku jiro dugsiga dhexe fasalkiisa todobaad.
Waxad heli kartaa macluumaad ku saabsan fursadaha kala duwan ee waxqabadka waxkhtiga firaaqada ah ee dagmadaada qaybaheeda thaqaafada iyo jimicsiga. Sidoo kale ururada laxaad la’aanta ayaa diyaaraya waxqabadyo kala duwan oo wakhtiga firaaqada ah. Tusaale ahaan Sporttiklub:ka Guddiga olombikada naafada ee Finland wuxuu qabanqaabiyaa waxqabadyo kala duwan oo jimicsiga iyo isboortiga ah.
Dadka horumarka naafada ka ah adeegyadooda gaar ah
Dadka horumarka naafada ka ah adeegyadooda gaar ah waxaa ka mida
Waxqabadka shaqada iyo waxqabadka maalinlaha ah
Adeega dajinta (Asumispalvelu) ujeediisu waa in qofka naafada ka ah xaga horumarku dagi guri , kaasi oo ka heli karo caawin iyo taageero kala duwan. Ka akhli macluumaad dheeraad ah bogga InfoFinland Caawin- iyo adeega dajinta.
Kalkaaliye guri (Perhehoito) waxaa loola jeeda, in qofka la xanaaneeyo, la tarbiyadeeyo iyo la ilaaliyo markaa waxaa loo qaban qaabiyaa qof ka baxsan gurigooda oo ka yimi guri kale.Qofka qaba laxaad la’aanta horumarka ee u baahan xanaanayntu wuxuu daganaan karaa guri reerkooda. Guriga reerkooda sidoo kale wuxuu u daganaan karaa si ku meel gaadh ah. Kalkaaliye guri waxaa looga qaban qaabin karaa qof guriga laga heshiiyey.
Hadii qofka qaba naafada horumarku uu u baahan yahay wakhti walba cid xanaanaysa, uu waayo cid ku xanaanaysa gurigiisa ama deegaanka adeega, wuxuu dagi karaa xarunta dadkaasi loogu talo galay. xarunta wuxuu daganaan karaa sidoo kale wakhtiyo gaaban.
Degmooyinku waxay qaban qaabiyaan wax qabadka shaqada iyo wax qabadka maalinlaha ah ee dadka laxaadka la’. Waxqabadka shaqadu(Työtoiminta) waxay fududaysaa shaqada. Wax-qabadka maalinlaha ah (Päivätoiminta) waxaa loogu talo galay dadka laxaadka la’ kuwooda ad adag, ee aan ka qayb galin wax qabadka shaqada.Wax qabadka maalinlaha ah waxaa ku jiri kara cunto karin, wada-sheekaysi iyo lugayn.
Internetka waxaad ka heli kartaa bangiga macluumaadka sida loo xaneeneeyo dadka laxaad la’aanta horumarka qaba (Kehitysvammahuollon tietopankki), Halkaasi oo aad ka heli karto macluumaad faa’iido badan u le dadka qaba laxaad la’aanta horumarka iyo sidoo kale adeegyo loogu talo galay dadka laxaadka la’.Adeegu waa luuqada finishka.
Adeegyada dagaanka ee dadka caqliga dhimmanFinnish
Dadka caqliga dhimman iyo shaqadaFinnish